Cardiogenic Shock (နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်း) - Hello Sayarwon
Cardiogenic Shock (နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cardiogenic Shock (နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်း)
Cardiogenic Shock (နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်း) ကဘာလဲ။
နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းဆိုတာ နှလုံးက ကိုယ်ခန္ဓါအတွက်လိုအပ်တဲ့ သွေးကိုရုတ်တရပ် မညှစ်ထုတ်နိုင်တော့ခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ သင့်နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် နှလုံးပျက်ဆီးသွားတဲ့ အချိန်မှာဖြစ်တယ်။ (ပြင်းထန်သော နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှု)
Cardiogenic Shock (နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းဟာ အဖြစ်နည်းပေမယ့် ချက်ချင်းကုသမှု မခံယူလျှင် သေစေနိုင်သော အခြေအနေုဖြစ်တယ်။
ချက်ချင်းကုသလျှင် လူနာတွေရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က အသက်ရှင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထပ်မံသိလိုသောအချက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
Cardiogenic Shock (နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့ သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်များမှသိနိုင်တဲ့ နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။
သွေးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း သို့မဟုတ် စမ်းမရခြင်း
ပုံမှန်ထက် ဆီးသွားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးမထွက်ခြင်း
ရင်ဘက်အောင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ရင်ဘက်ကို ဖိထားသလိုခံစားရခြင်း
ကနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ စိတ်ထွေပြားခြင်း နှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း
အသားကို ကိုင်ကြည့်လျှင် အေးစက်နေခြင်း
ဒီထဲမှာမပါတဲ့ လက္ခဏာတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရောဂါလက္ခဏာအကြောင်းကို ပိုပြီးသိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ
အပေါ်မှာပြထားတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့လျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်ပါတယ်။ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကို ချက်ချင်းကုသခြင်းဟာ နှလုံးပျက်ဆီးမှုနည်းစေပြီး အသက်ရှင်ဖို့ အခွင့်အရေးပိုများပါတယ်။
Cardiogenic Shock (နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဒီအချက်တွေက နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းမှာ နှလုံးကို အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်မရခြင်း ဖြစ်ပြီး နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကို ဖြစ်စေကာ နှလုံးအခန်းတွေကို ပျက်ဆီးစေတယ်။
( နှလုံးဘယ်ဘက်သွေးလွှတ်ခန်း) ။ အောက်ဆီဂျင်ပါတဲ့သွေးတွေက နှလုံးကိုမရောက်တဲ့အခါ နှလုံးကြွက်သားအားနည်းပြီး နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ဒါ့အပြင် နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ နှလုံးကြွက်သားများယောင်ခြင်း၊ နှလုံးအဆို့များကို ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆေးသောက်တဲ့ ပမာဏလွန်ကဲခြင်း၊ နှလုံးသွေးညှစ်ခြင်းကို ထိခိုက်စေသော အဆိပ်များကြောင့် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Cardiogenic Shock (နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သင့်မှာ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုရှိလျှင် နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ-
နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်း ၊ နှလုံးပျက်ဆီးခြင်းဖြစ်ဖူးလျှင်
နှလုံးရဲ့ သွေးကြောအကြီးများပိတ်ဆို့နေလျှင် ( နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ)
ဆီးချို သို့မဟုတ် သွေးတိုးရောဂါ
Cardiogenic Shock (နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းကိုသိဖို့ ဆရာဝန်များလုပ်သော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းများမှာ-
သွေးပေါင်ချိန်ခြင်း။ ရှော့ခ်ရတဲ့လူဟာ သွေးတိုးနေတတ်ပါတယ်။
Electrocardiogram( ECG) ရိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်မှာ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုရှိ ၊ မရှိသိနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားပေါ်မှာ လျှပ်စီးစေတဲ့ငုတ်တံလေးများတပ်ပြီး ရိုက်ကူးခြင်းဖြင့် သင့်နှလုံးရဲ့ လျှပ်စီးမှုကို ပြသနိုင်တဲ့ လှိုင်းတွေပေါ်လာပြီး စာရွက်မှာဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။
ရင်ဘက်ဓါတ်မှန်။ သင့်နှလုံးရဲ့ အရွယ်အစား၊ ပုံစံနှင့် သွေးကြောတွေရဲ့ အခြေအနေ၊ အဆုတ်အတွင်း အရည်ရှိ၊မရှိသိရန် ရိုက်ပါလိမ့်မယ်။
သွေးစစ်ဆေးမှုများလုပ်ခြင်းဖြင့် ကလီစာများပျက်ဆီးမှု၊ ရောဂါပိုးဝင်မှုနှင့် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။
Echocardiogram။ နှလုံးရဲ့ အသံလှိုင်းတွေကို ဖမ်းယူပြီး နှလုံးပျက်ဆီးမှုနှင့် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှလုံးမှထွက်တဲ့ အသံလှိုင်းတွေကို ရင်ဘက်ပေါ်မှာစက်တပ်၍ ဖမ်းယူပြီး နှလုံးရဲ့ပုံစံတွေကို ဗီဒီယိုရိုက်ယူလို့ရပါတယ်။
နှလုံးသွေးကြောထဲကို ပြွန်ထည့်ပြီးရိုက်ယူခြင်း။ ခြေထောက်ရှိသွေးလွှွတ်ကြောမှ သေးငယ်သောပြွန်ထည့်ပြီး ဆိုးဆေးထိုးထည့်ခြင်းဖြင့် ဆေးတွေက သွေးလွှတ်ကြောမှတစ်ဆင့် နှလုံးကိုရောက်သွားပြီး ဓါတ်မှန်မှာ သွေးကြောပိတ်နေတာ သို့မဟုတ် ကျဉ်းနေတာတွေ ပုံပေါ်လာပါတယ်။
Cardiogenic Shock (နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသနေစဉ်မှာ ကြွက်သားနဲ့ ကလီစာတွေပျက်ဆီးမှုကို လျှော့ချရန် အောက်ဆီဂျင်များများပေးထားဖို့လိုပါတယ်။ တခါတလေမှာ အသက်ရှူဖို့အတွက် အသက်ရှူစက်တွေ တပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်လက်မောင်းကနေတဆင့် ဆေးနှင့်အရည်များကို အကြောထဲသွင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
နှလုံးခုန်နှုန်းကောင်းစေပြီး သင့်ရဲ့သွေးကို ပြန်ကောင်းစေပြီး နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းကို ကောင်းစေတဲ့ ဆေးတချို့ရှိပါတယ်။
Aspirin ။ သင့်ဟာ ဒီဆေးကို အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးတွေ ရောက်လာလာခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးရုံရောက်ရောက်ခြင်း ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီဆေးက သွေးခဲတာကို လျှော့ချပေးပြီး သွေးကြောကျဉ်းနေတဲ့နေရာကနေ သွေးစီးဆင်းစေပါတယ်။
Thrombolytics ။ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရပြီး ဒီဆေးကို စောပေးလေ အသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းများပြီး နှလုံးပျက်ဆီးမှုနည်းလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆေးကို အရေးပေါ်နှလုံးသွေးကြောထဲ ပြွန်သွင်းလို့ မရတဲ့အချိန်မှ သုံးပါတယ်။
Superaspirins ။ ဒီဆေးက Aspirin နဲ့အာနိသင်တူပြီး သွေးခဲအသစ်တွေထပ်မဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။
တခြားသွေးကျဲစေတဲ့ ဆေးများ။ ဥပမာ- Heparin သွေးခဲမဖြစ်စေပါဘူး။ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာ Heparinထိုးဆေး သို့မဟုတ် အကြောဆေးကို ပေးပါတယ်။
Inotropic agents။ ဒီဆေးတွေကို တခြားဆေးတွေမရခင် နှလုံးရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ပေးပါတယ်။
နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းကို ကုသတဲ့နည်းလမ်းတွေက နှလုံးရဲ့ သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းအောင် အဓိကလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါတွေကတော့-
နှလုံးထဲ ပြွန်ထည့်ခြင်။ ဆရာဝန်က နှလုံးသွေးကြောထဲကို ပြွန်ထည့်ပြီးရိုက်ယူရာမှတွေ့ရှိသော နှလုံးရဲ့ သွေးကြောမရှိ ပိတ်ဆို့နေတဲ့နေရာတွေကို ခြေထောက်ရှိ သွေးလွှွတ်ကြောမှတစ်ဆင့် ဘောလုံးပါသော သေးငယ်သောပြွန်ထည့်ပါလိမ့်မယ်။
ဘောလုံးက သတ္တုပြွန်ကို ပွင့်စေပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက သွေးကြောမကြီးတွင် ဘောလုံးနှင့် သွေးညှစ်ပေးတဲ့ pump ကိုထည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဘောလုံးPump ဟာ သွေးလွှတ်ကြောထဲမှာ ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက် လုပ်ပေးပြီး သွေးတွေကို စီးစေပါတယ်။ နှလုံးရဲ့အလုပ်တွေကို သက်သာစေပါတယ်။
ဆေးတွေ ဆေးနည်းတွေက မသက်သာလျှင် ဆရာဝန်တွေက ခွဲစိတ်မှုကို ညွှန်းဆိုပါလိမ့်မယ်။
Coronary artery bypass Surgery- နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှပြန်မကောင်းလျှင် ဆရာဝန်တွေက ဒီခွဲစိတ်မှုကို ညွှန်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီခွဲစိတ်မှုကို အရေးပေါ်အခြေအနေမှာပဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးဒဏ်ရာကို ပြန်ကောင်းရန်ခွဲစိတ်ခြင်း- နှလုံးအခန်းများပြဲစုတ်နေခြင်း၊ နှလုံးအဆို့များပျက်ဆီးနေခြင်း က နှလုံးကိုထိခိုက်ပြီ ရှော့ခ်ရစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ပြန်ပြင်ဖို့ ခွဲစိတ်ရန် ဆရာဝန်က အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။
နှလုံးခုန်စက်ထည့်ခြင်း။ ဒီစက်ကို ဝမ်းဗိုက်ကနေထည့်ပြီး နှလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် နှလုံးခုန်တာကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
နှလုံးခုန်စက်အစားသွင်းခြင်းကို နှလုံးအစားထိုးဖို့ နှလုံးအသစ်ရတဲ့အထိမစောင့်နိုင်တော့တဲ့ နှလုံးပျက်ဆီးခြင်းနောက်ဆုံးအဆင့်လူနာတွေမှာ သုံးပါတယ်။
နှလုံးအစားထိုးခြင်းက နောက်ဆုံးနည်းလမ်းပါ။ နှလံးုက ကုသနည်းတွေအားလုံးနဲ့ မရတော့အောင် ပျက်ဆီးနေလျှင် သုံးပါတယ်။
နှလုံးထိခိုက် ရှော့ခ်ရခြင်းကို ကာကွယ်ရန်လိုအပ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါနေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက နှလုံးကို ထိခိုက်ရှော့ခ်ရခြင်းမှ လျှော့ချပေးပါလိမ့်မယ်။
သွေးပေါင်ချိန်မတက်အောင် ထိန်းထားခြင်း။ လူနာဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်တယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ရမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းထားရမယ်။ ဆားနဲ့ အရက်တွေကို ဖြတ်သင့်တယ်။
သွေးတိုးကို အမြဲစစ်ဆေးသင့်တယ်။ ဆရာဝန်ပေးထားတဲ့ သွေးတိုးရောဂါအတွက် ဆေးတွေကိုလည်း ပုံမှန်သောက်သင့်တယ်။
ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်က သွေးပေါင်ကို ကျစေပြီး ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ကိုလက်စရောပမာဏကို ကောင်းမွန်စေတယ်။
အဆီနှင့် ကိုလက်စရော(အထူးသဖြင့် ပြည့်ဝဆီ) ကိုလျှော့စားခြင်းက နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုနည်းစေတယ်။ အစားအသောက်တစ်မျိုးထဲနှင့် ကိုလက်စရောကို မထိန်းနိုင်လျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီး ကိုလက်စရောကျဆေးတွေကို သောက်နိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းက သွေးပေါင်ကို ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းမှာ HDL ကိုလက်စရောများခြင်းက သွေးကြောတွေနှင့် နှလုံးကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ သင့် ကိုယ်အလေးချိန်၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကိ လျှောချဖို့လည်း အထောက်အကူပေးပါတယ်။
သင်ဟာ နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုခံရလျှင် စောစီးစွာကုသခြင်းက နှလုံးထိခိုက်ပြီးရှော့ခ်မရအောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရရခြင်း အရေးပေါ်ကုသမှုကို ခံယူပါ။
Cardiogenic shock. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cardiogenic-shock/basics/definition/con-20034247. Accessed July 22, 2016.
Cardiogenic shock. https://medlineplus.gov/ency/article/000185.htm. Accessed July 22, 2016
Acute Myocardial Infarct (ရုတ်တရက် နှလုံးကြွက်သား ပုပ်ခြင်း)
Mitral Valve Prolapse (နှလုံးအဆို့ရှင် ပြားသွားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ)
သွေးကြောများ ပိုမိုကောင်းမွန်ကျန်းမာခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် နို့တိုက်ခြင်း